स्वास्थ्यको लागि बेथेको साग खानुका फाइदाहरू - krishipost.com
स्वास्थ्यको लागि बेथेको साग खानुका फाइदाहरू
बेथेको साग मलाई मन पर्छ । आजको लेखमा यसका फाइदाबारे पाठकलाई जानकारी पस्कने छौं । प्रकृतिले मानव स्वास्थ्यका लागि बेथे दिएको छ । हामीले बेथेको साग र दाना खानाले के कस्ता रोग निको हुन सक्छ भन्नेबारे जानकारी प्राप्त गरेर सबैले बेथे खाने गरे ठूलो फाइदा हुन सक्छ भन्ने कुरा यो लेखबाट थाहा दिनेछौं र हजुरहरूले पाउनु हुनेछ ।
हुनत हामीले यो भुल्नु हुदैन हरियो सागमा थुप्रै औषधिय गुण भरिएको छ । प्राप्त जानकारीको अभावको कारणले पनि हामीले फाइदा उठाउन सकि रहेका छैनौ जस्तो लाग्छ । बेथेको सागको दैनिक प्रयोगबाट हामीलाई आइरनको कमीलाई बेथेको सागले पूर्ति गर्दछ । बेथेमा फस्फोरस, भिटामिन डी र क्षार तत्व धेरै मात्रामा प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
भोक नलाग्ने, खाना ढिलो पच्ने, डकार, पेट फुल्ने जस्ता समस्या हटाउन पनि बेथे लाभदायक हुन्छ । पिसाब, मूत्राशय, मृगौला सम्बन्धी रोग निको पार्न र छाला सम्बन्धी रोगमा समेत यसको उपयोग प्रभावकारी मानिएको छ । बेथेको दानालाई पिसेर लेदो बनाएर फोडामा लगाउदा पिलो चाडो निको हुने गर्दछ भने फेसमा लगाउदा दाग मेट्दछ ।
वेथेबाट हुने फाइदाहरू
१. आयुर्वेदमा गरिएको एक अनुसन्धानले बेथेको साग नियमित खानाले स्तन क्यान्सरको सम्भावना कम हुने देखाएको छ । यसमा उपलब्ध सेलिनियम, ओमेगा-३ र ६ फैटी एसिड स्तन क्यान्सररोधक हुन्छन् ।
२. बेथेको १० ग्राम दानालाई करिव दुई मिलीलीटर पानीमा उमाल्नुहोस् । ५० मिलीलीटर रहुन्जेल उमालेपछि ताततातै पिउँनुहोस् । यस्तो एक महिनासम्म विहान-बेलुका पिउनुहोस्, जोर्नी दुखाईबाट तपाईलाई राहत मिल्छ ।
३. जहिलेसम्म बेथेको सब्जी मिल्छ, खाने गर्नुहोस् । बेथेलाई पानीमा उमालेर पिउनुहोस् । यसले पेटका हरेक प्रकारका रोगलाई पनि ठिक गर्छ ।
४. बेथेले पेटलाई ताकत दिन्छ र कब्जियत हुन दिँदैन । यसले पेटलाई सफा गर्छ ।
५. दुई चम्चा बेथेको दाना एक गिलास पानीमा उमाल्नुहोस् । पानी आधा सुकेपछि छानेर पिउँनाले रोकिएको महिनावारी खुल्छ ।
नोट : सागसब्जी खानलाई कसैलाई सोध्नु पर्दैन तर औषधि बनाएर सेवन गर्दा मात्रा सहि हुन आवश्यक छ । वैद्यको परामर्शमा यस्ता बस्तु प्रयोग गर्नु राम्रो हुनेछ । मानव स्वास्थ्यका लागी बेथे मात्र होइन हरियो साग भान्सामा बढी प्रयोग गर्नुस भन्ने हाम्रो राय छ ।